" Marxuum Aniis Saalax Xaaji Xasan waxa uu ahaa nin qarankan wax weyn ku leh, gaar ahaan gobolka Sanaag oo uu ka qayb qaatay Nabadiisa iyo Horumarkiisa."
" Marxuum Aniis Saalax Xaaji Xasan waxa uu ahaa nin qarankan wax weyn ku leh, gaar ahaan gobolka Sanaag oo uu ka qayb qaatay Nabadiisa iyo Horumarkiisa." 0 Friday 6th January 2017 19:56:22 in Wararkii Maanta by Super Admin Visits: 307
" Marxuum Aniis Saalax Xaaji Xasan waxa uu ahaa nin qarankan wax weyn ku leh, gaar ahaan gobolka Sanaag oo uu ka qayb qaatay Nabadiisa iyo Horumarkiisa." Inaalilaahu Wa Inaailayhi Raajacuun.
Waxa aynu nahay adoomo ILAHAY dhamaanteenba waynu wada dhimanaynaa, waxa aynu maanta joognaa xabaashii marxuuum Aniis Saalax Xaaji Xasan, oo geeri naxdin lihi ku timid.
Waxaan halkan ka tacsiyadaynaynaa qaraabadii, eheladii iyo asaxaabtii faraha badnayd ee uu Aniis lahaa, iyo guud ahaanba shacbiga Somaliland, gaar ahaana shacbiga gobolka Sanaag si gaar ah waxaan u tacsiyadaynayaa bahda waxbarashada ee uu ka mid ahaa Aniis, isagoo ahaa gudoomiyihii waxbarashada gobolka Sanaag.
Aniis Saalax Xaaji Xasan oo maanta inaga hooseeya, walaalkeen ILAHAY waxa aynu ugu baryeynaa dambi dhaaf iyo inuu naxariistiisa ka waraabiyo, janada fardawsana uu galiyo. Aniis waa nin wayn oo qarankan qiimo ku leh oo caan ah, waxaanay ka muuqadataa maanta xabaashiisa sida loo yimid iyo bulshada kala duwan ee aaskiisa ka soo qayb gashay, Aniis waxa uu ahaa nin qarankan wax weyn ku leh, gaar ahaan gobolka Sanaag, nabadiisa iyo horumarkiisaba, midnimadiisa iyo wadajirkiisaba, dadkii ka soo qayb qaatay midayntii iyo nabadayntii bulshada gobolka Sanaag ayuu ka mid ahaa.
Wuxuu ahaan jiray intii aanu noqon gudoomiyaha waxbarashada gobolka noqon Badhasaab ku xigeenka gobolka Sanaag ilaayo wakhtigii dalka lagu soo laabtay, ILAHAY Walaalkeen ha u naxariisto inaga ILAHAY Khaatumo ha inoo wanaajiyo.”
Send to your friend Related Xaaladda Qoyska Gudoomiyihii Hore Ee Baanka Somaliland Marxuum Cabdiraxmaan Ducaale Oo Soo Noqotay + Wiilkiisa Oo Afka F May 27, 2017